Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka Hadley Qaraxyada ka dhacaya Puntland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka Hadley Qaraxyada ka dhacaya Puntland.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ka Hadley Qaraxyada ka dhacaya Puntland.
December 21, 2009 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Dawladda Soomaaliyeed ee Puntland Mudane Cabdiraxmaan Faroole ayaa markii u horeysey ka hadley qaraxyada lala beegsanayo masuuliyiinta.
“Sida lagawada warhayo tan iyo markii la diley Xildhibaan Ibraahim iyo Garsoore Awaare 11.11.2009, qaraxyadii dhacaayey waxa ay ahaayeen kuwo siyaasadeysan oo abaabulan oo ururo argagixiso ay ka danbeeyeen, iyaga oo ujeedo siyaasadeed oo qoto dheer leh, dhawrkaas fal ee abaabulan waxa ay ku tusayaan in lala beegsanaayo Puntland” ayuu yri madaxweyne Faroole mar uu ka hadlaayy qaraxyada.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa hadalkisa ku daray “Puntland waxa ay ahayd tan iyo markii la asasey iyo ka horba meel degan oo soomaliya kamid ah, halkaas oo lagu soo dhaweeyo Soomaali oo dhan, laakiin arintaasi ma kenin faa’iidadii ay dadka reer Puntland ka sugayen walaalahood, waxay noqotey meel la isku soo galay kadib markii qaraxyo badan iyo dilal badan la sameeyay wixii Koonfur ka jireyna la damcay in la soo wareejiyo”.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ciidanka amaanku ay gacanta ku dhigen dadkii ka danbeeyey dilkii xildhibaan Ibraahim Cilmi Gaab iyo Garsoore Maxamed Cabdi Awaare kuwaas oo hal habeen ka wada dhacay Garoowe iyo Bosaso.
Dhanka kale Madaxweynaha ayaa baaq u direy shacabka Puntland waxaana uu ka codsadey dhalinyarada, ardeyda iyo haweenku in ay qayb libaax ka qaataan sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hay’adaha amaanka, si wadajir ah la’aantiina waxba lama qaban karo ayuu yiri madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa baaq u direy dawladdaha deriska ah waxaana uu ka codsadey in ay taageeraan dawladiisa oo ay dagaal kula jiraan kuwo aan gobolka oo dhan aan xasilooni la dooneyn.
Tan iyo markii uu dhacay qaraxii la donaayey in lagu dilo Gudoomiyaha Golaha Wakiilada taas oo rabbi ka badbaadiyey inkasta oo askeri ilaaladiisa kamid ah u ku dhintey ayaa loo soo qabqabtey dad badan, kuwaas oo baaritan xoogleh lagu hayo, waxaana shir deg deg ah isugu yimid Golaha wasiirada taas oo ay uga arinsanayaan sida ay ka yeelayaan dagaalka qarsoon ee Puntland lagu soo qaaday.
Tagged With: Dilal Qorsheysan, Qarax Bosaso